Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga oo Goma-gofa Raashin Kadhacay & Kacdoon Kadhashay.
Ciidanka Gumaysiga oo Goma-gofa Raashin Kadhacay & Kacdoon Kadhashay.
Posted by Dulmane	/ May 1, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Goma-gofa ee Gobolka Shucuubta Koonfureed ee wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in maamulku sheega Gobolka iyo ciidanka Wayaanuhu ay siwada jir ah udhaceen raashin loogu tala galay dadka abaaraysan.
Warka ayaa intaas kudaraya in kumanaan kiintaal oo raashin caawimaad loogu talo galay ah ay leexsadeen ciidanka maamul kusheega halkaas kajira iyo ciidanka dhaqanka xun ee gumaysigu.
Magaalada Goma-gofa iyo deegaanada kuxeeran ayaa ah dhulka ugu daran ee ay saamaynta kuyeelatay abaartu waxaana lasheegayaa in ay deegaankaas kunool yihiin kumanaan shacab ah oo ay macaluuli hayso.
Dhinaca kale ciidanka wayaanaha oo raashinka ladhacay uraad gadaya ayaa lasheegayaa in ay xidh xidheen dadwayne aad ubadan oo kuwii ladhacay ee tabaalaysnaa ah iyagoo sheegay in ay dhaceen raashinkii dadwaynaha, odayaasha deegaanka oo arintan kahadlay ayaa sheegay raashin ay ciidan ilaalinayaan in aysan shacabku xadi karin, isla markaana dadkan laxidh xidhay ladulminayo.
Dhinaca kale dhalinta kudhaqan Gobolka Goma-gofa ayaa lasheegayaa in ay kacdoon sameeyeen waxayna dhalintu kasoo horjeedaan dhibka iyaga kudhacay ee haana lagu iqaabayo.
Guud ahaan wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa laga soo sheegayaa abaaro baahsan oo dad iyo duunyaba saamaysay waxaana lasheegayaa in ay kooxda TPLF tu baasiin kusii shubtay dhibaatada taagan.
Dhinaca kale daraasad lasameeyay ayaa lagu ogaaday in wadanka Itoobiya uuyahay wadanka ugu daran ee uu saamaynta kuyeeshay cudurka Maraariyadu (duumada) waxaana lasheegayaa in cudurkaas laga helay 239 Dagmo oo guud ahaan wadanka Itoobiya ah.
Cudurada iyo abaaraha ayaa lasheegayaa in ay baabi’iyeen kumanaan dadka lagumaysto ah waxaana lasheegayaa in ay maamul xumadu kow katahay dhibka wadanka kajira.